News | Uruguay
News | Tag: Uruguay
उरुग्वेसँग राम्रो रेकर्ड नभएको फ्रान्सले आजको खेलमा के गर्ला ? (यस्तो छ इतिहास)
काठमाडौं । आज साँझ निझ्नी नोभगोरोद रंगशालामा विश्वकपको क्वार्टरफाइनलको पहिलो खेल हुँदैछ । आजको पहिलो खेलमा दुई विश्वकप विजेता फ्रान्स र उरुग्वे भिड्दैछन् । उरुग्वे सन् १९३० र १९५० को विश्वकपको उपाधि जितेको थियो भने फ्रान्सले सन् १९९८ मा उपाधि जितेको थियो ।
विश्वकपको क्वार्टफाइनलमा उरुग्वे र फ्रान्स भिड्ने
काठमाडौं । शनिबार राति सम्पन्न खेलबाट क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएका दुई राष्ट्रहरु फ्रान्स र उरुग्वे सेमिफाइनल प्रवेशको लागि भिड्ने भएका छन् ।
म्याच प्रिभ्युः रोनाल्डोलाई रोक्न सक्ला छ उरुग्वेले
विश्वकपको अन्तिम १६ मा आज समूह ए को विजेता टोली युरुग्वेविरुद्ध समूह बीको उपविजेता राष्ट्र पोर्चुगल भिड्दैछ । समूह चरणमा युरुग्वेले शत प्रतिशत जित निकालेको थियो भने पोर्चुगलले २ खेलमा बराबरी तथा १ खेलमा जित हासिल गरेर समूहको उपविजेता बनेको हो ।
मुम्बइमा सानो जहाज दुर्घटना, पाँच जनाकाे मृत्यु
मुम्बइ । मुम्बइमा बिहीबार एउटा सानो जहाज दुर्घटनामा परेको छ । त्यस दुर्घटनाका कारण पाँच जनाको ज्यान गएको छ ।
१०० औं खेलमा स्वारेजको विजयी गोल
काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेका खेलाडी लुईस स्वारेजले राष्ट्रको लागि खेलको १०० औं खेलमा गोल गरी टोलीलाई विश्वकपको अन्तिम १६ मा पुर्याएका छन् ।
रसिया या उरुग्वेले विश्वकपको अन्तिम १६ मा स्थान बनाए
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको समूह ‘बी’बाट आयोजक राष्ट्र रसिया र उरुग्वेले अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गरेका छन् । बुधबार राति रोस्तोभ एरिनामा सम्पन्न खेलमा उरुग्वेले साउदी अरेबियालाई १–० गोलले पराजित गरेपछि आयोजक राष्ट्र र उरुग्वेले अर्को चरणमा प्रवेश पाएको हो ।
उरुग्वेलाई हराएर जितको खडेरी टार्ला त साउदी अरेबियाले ?
काठमाडौं । विश्वकपको समूह चरणको दोस्रो खेलमा आज दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वे र एशियाली राष्ट्र साउदी अरेबिया भिड्दैछन् । समूह ‘ए’ को टोली उरुग्वेले यसअघिको खेलमा इजिप्टलाई पराजित गरेर ३ अंक जोडिसकेको छ भने साउदी अंकबिहिन अवस्थामा छ ।
इजिप्ट र उरुग्वेबीचको खेलहेर्न ५ हजार दर्शक नआएपछि फिफाद्वारा अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । टिकट काटेर पनि ५ हजारभन्दा बढी दर्शक खेल हेर्न नआएपछि फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले त्यस घटनाबारेमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
उरुग्वेलाई हराउने दाउमा इजिप्ट (म्याच प्रिभ्यु)
काठमाडौं । विश्वकपको दोस्रो खेलमा आज साँझ पौने ६ बजे अफ्रिकी राष्ट्र इजिप्ट र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । विश्वकपको समूह ‘ए’ अन्तर्गतको खेल साँझ पौने ६ बजे सुरु हुँदैछ ।